TapToSnap: kitiho ny efijery mba haka sary (Cydia) | Vaovao IPhone
Ny rafitra miasa farany (sy ny fanavaozana) izay tonga eny an-tsena, toy ny Android sasany dia mamela anao haka sary amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny efijery. Tsara izany raha tsy te-tsindrio ny bokotra izay tonga amin'ny alàlan'ny fampiharana fakantsary na raha tsy te-hanery ny bokotra ara-batana hita amin'ny iPhone isika ohatra. Eny ary, elias (mpamorona Cydia) namorona TapToSnap, tweak iray mamela izany, makà sary ao anaty fakan-tsary miaraka amin'ny paompy fotsiny eo amin'ny efijery. Namboarina ilay tweak satria tiany ny terminal (LG G3) ahafahany manao izany.
Kitiho eo amin'ny efijery raha haka sary amin'ny TapToSnap
Ilay tweak resahina, TapToSnap, dia ao amin'ny repo ofisialy BigBoss ary azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. Ny anarana hoe elias dia fantatra amin'ny anarana hoe elias ary, araka ny nolazaiko taminareo, namorona ilay tweak satria ny LG G3 dia namela anao naka sary tamin'ny fanoratana fotsiny teo amin'ny efijery.
Amin'ny TapToSnap dia afaka maka sary avy amin'ny fampiharana teratany isika: «Camera» amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny efijery. CRehefa manindry ny efijery isika, dia hisy sary horaisina ary ho voatahiry ao amin'ny galeriany, toy ny hoe tsindrio ny bokotra fotsy izay misy teratany ao amin'ilay fampiharana.
Raha te hampandeha ilay tweak dia tsy maintsy mandeha any amin'ny iOS Settings ianao, tsindrio TapToSnap, ary ovainay ny bokotra manao hoe "Enable" amin'ny fotsy ho maitso.
Ny iray amin'ireo maharatsy an'ity tweak ity dia ny tsy fitoviana amin'ireo fika hafa maro izay tafiditra ao anaty fakan-tsary toy ny effets +. Amin'ireo fanavaozana manaraka dia manantena izahay fa ny mpamorona azy, elias, dia hanitatra ny fifanarahana amin'ny tweaks hafa ka ny traikefan'ny mpampiasa dia tsara lavitra noho ny ankehitriny (izay tsy ratsy).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » TapToSnap: kitiho ny efijery mba haka sary (Cydia)
Cabin, avereno mamerina mora foana ny iPhone ary tsy manimba ny Tselatra
George Hotz, aka Geohot, dia nanatevin-daharana ny ekipa mpijirika nofinofin'i Google